Warar - Ku lifaaqan qalabka wax lagu sawiro
Ku lifaaqan qalabka wiishka qaadista ayaa ah nooc cusub oo tiknoolajiyad wax lagu qoro oo si dhakhso leh loo soo saaray bilowgii qarnigan, taas oo saamayn muhiim ah ku leh horumarka tikniyoolajiyadda dhismaha ee dalkayga. Waxay u rogtaa hawlgallada meelaha sare hawlo heer-hoose ah, waxayna u beddeleysaa hawlgallada la joojiyay howlaha gudaha ee jir. Waxay leedahay karbon-yar yar oo muhiim ah, tiknoolajiyad sare, waana mid ka dhaqaale badan, amaan badan, uguna habboon.
1. Kaarboon yar
Badbaadso 70% isticmaalka birta
Ku keydi isticmaalka korontada 95%
Keydso 30% alaabada dhismaha laga isticmaalo
Waxaa lagu dabaqi karaa qaybta weyn ee dhismayaasha ka badan 45 mitir. Dabaqa sare, ayaa si cad u muuqda dhaqaalaha, dhisme walbana wuxuu badbaadin karaa 30% -60% kharashka.
Waxaa lagu codsan karaa jirka ugu weyn ee dhismayaasha kala duwan
Adeegsiga nidaamka xakamaynta iskumid ah ee tooska ah iyo nidaamka kontoroolka fog ayaa si firfircoon uga hortagi kara xaaladaha aan ammaanka lahayn, iyo in la qaato noocyo badan oo noocyo ah oo ka hortagga dhicitaanka ah si looga hortago guuldarrooyinka sida cilladda qalabka dib-u-dejinta, taas oo hubin karta in jirku uu had iyo jeer yahay xaalad ammaan ah oo si wax ku ool ah looga hortago dayrta.
4. Caqli badan
Nidaamka xakamaynta tiknoolajiyada kumbuyuutarka kombuyuutarka wuxuu soo bandhigi karaa xaaladda qaadista waqtiga dhabta ah wuxuuna si otomaatig ah u ururinayaa qiimaha xamuulka ee meel kasta oo mashiin qaadista ah. Marka culeyska mashiin gaar ah uu ka bato 15% qiimaha naqshadeynta, wuxuu si otomaatig ah u yeeri doonaa oo u muujin doonaa booska qeylo dhaanta qaabka codka iyo iftiinka; markii ay ka badato 30%, kooxda qalabka wax lagu qaado ayaa si otomaatig ah u istaagi doona ilaa cilladda laga takhaluso. Waxay si wax ku ool ah uga hortageysaa khataraha amniga ee ka dhalan kara culeyska xad dhaafka ah ama culeyska xad dhaafka ah.
Xaqiiji shaqada dhismaha hooseeya iyo adeegsiga sare. Waxaa lagu soo ururiyey sagxadda qaybta ugu muhiimsan ee dhismaha hal mar, oo lagu dhejiyay dhismaha, oo si isdaba joog ah ayaa loogu hagaajiyay kororka dhererka dabaqa. Geedi socodka hawlgalka oo dhami ma fadhiyo wiishyo kale, taas oo si weyn u wanaajisa waxtarka dhismaha, jawiga goobtana waa mid bini aadamnimo badan, maamulka iyo dayactirka ayaa ka fudud, Saamaynta hawlgalka ilbaxnimada ayaa aad u muuqata.
Ka gudub muuqaalka jahwareerka leh ee iskudhafka dhaqameed, ka dhig sawirka guud ee mashruuca mid kooban oo joogto ah, oo si hufan oo caqli gal ah u tusi kara sawirka nabdoon iyo ilbaxnimada ee mashruuca dhismaha.
Waqtiga boostada: Sep-09-2020
Qaybo ka mid ah Isgoysyada Ringlock, Culus Waajibaadka Isku-dhafka Ringlock, Qaybta 'Ringlock Scaffolding Bracket', Iskeelka Iskeelka Isku-dhejiska ah ee Jack, Kwikstage Qalabka Isboortiga, Iskuxidhka Birta Cuplock,